Sida loo nadiifiyo saacada gacanta | Niman qurux badan
Saacado badan oo curcurku waa qaybo gaar ah u baahan dayactir waqti ka waqti. Haddii aad u malaynayso inay lumisay dhalaal, cod ama midab, laga yaabee inay tahay waqtigii aad ogaan lahayd sida loo nadiifiyo saacada gacanta Marka aynu wajahayno wax kasta oo aan awoodno, waa in aan maskaxda ku haynaa in aysan ahayn wax soo saar kasta oo waxtar leh.
Haddii fikraddaadu tahay inaad isticmaasho a kiimiko gaar ah biraha, waa inaan dhahnaa ha ku degdegin sababtoo ah natiijada waxay dhaawici kartaa lakabka dhalaalaya saacaddaada Way fiicantahay in la isticmaalo qaar ka mid ah casharradayada yaryar iyadoo la adeegsanayo alaabada gacanta koowaad.
1 Nadiifinta saacada gacan-gacmeedka ee birta ah
1.1 Waxaad isticmaali kartaa baking soda, khal ama daawada cadayga
1.2 Hoos u geli saacadda si aad u nadiifiso
2 xadhig caag ah oo loogu talagalay saacadaha smart
3 Suunka maqaarka
4 Daawo Nadiifinta Kiiska
5 Immisa jeer ayaan nadiifin karnaa saacad?
Nadiifinta saacada gacan-gacmeedka ee birta ah
Nadiifinta degdega ah adigoon qoolayn waxaad isticmaali kartaa maro microfiber jilicsan. Waxaan si tartiib ah u xoqin doonaa iyo dhowr daqiiqo si aan uga saarno dhammaan faraha iyo qaar wasakh ah. Haddii aad rabto inaad wax badan ka hesho nadiifintaada oo aad siiso iftiin badan, waxaan ku dari karnaa wax yar nadiifiyaha galaas ama ujeedo badan. In kasta oo ay kula yaabban tahay, haddana waa xulafo aad u wanaagsan in laga dhigo birta aan lahayn dhalaalaysa. Alaab kale oo aan isticmaali karno ayaa ah Khal cad, maadaama ay tahay jeermis dile oo waliba iftiimaysa. Meel kasta oo aan ku aragno wasakh ayaanu xoqin doonnaa, waxaanan sugi doonnaa inaan aragno natiijadeeda.
Waxaad isticmaali kartaa baking soda, khal ama daawada cadayga
Hab kale oo guriga lagu sameeyo oo lagu nadiifiyo birta noocaan ah waa isticmaalka sodium bicarbonate. Si tan loo sameeyo, waxaanu kululayn doonaa biyo yar oo ku dar dhowr qaado oo ah dubista. Fikradda ayaa ah samee koollo kaas oo aanu ku xoqin doono dhammaan geesaha saacada. Si aan meesha uga saarno bicarbonate-ka waxaan isticmaali doonaa a maro qoyan oo biyo ah Si aad meesha uga saarto dhammaan wixii dheeraad ah, ha u oggolaan in midna ku sii jiro sababtoo ah waxay noqon kartaa daxal muddo ka dib.
oo leh daawada cadayga Waxaan sameyn karnaa si la mid ah iyo iyadoo la kaashanayo maro si aan si tartiib ah u xoqin ama isticmaalno cadayga. Buraashka ayaa kaa caawin doona inaad gasho dhammaan meelahaas kor u qaad wasakhda ku duugan. Waxaan ugu dambeyntii dhaafi doonaa maro nadiif ah ama suuf, oo leh dhaqdhaqaaqyo wareeg ah si aan uga baxno Nadiifi oo nadiifi dusha.
Hoos u geli saacadda si aad u nadiifiso
Ujeedadu waa in la kala tago daawashada suunka kiiska, si labada qayboodba si gooni ah loo nadiifiyo. Xarig badan waxay u baahan yihiin in la qooyay, iyadoo ku xiran wasakhda, markaa waxay u baahan yihiin inay ka fogaadaan farsamadooda. Dhanka kale, saacadaha qaar ayaa lagu dhex milmi karaa biyaha, maadaama ay adkaysi u leeyihiin, halkaas oo aad ku samayn karto nadiifintaas.
Dareeraha waa inuu noqdaa biyo diirran oo leh qadar yar saabuun ama khal cad badhkiis. Haddii suunka uu yahay cinjir waanu isticmaali karnaa khamriga. Haddii aad awoodid inaad ka saarto xargaha waxaad ku dhex milmi kartaa qaar ka mid ah dareerayaashan ilaa dhowr shan iyo toban daqiiqo.
xadhig caag ah oo loogu talagalay saacadaha smart
Saacadda noocaan ah way fududahay in la kala saaro kiiskeeda gacanka. Tallaabadan ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa xargaha ka samaysan noocyada kale ee birta ah. Xaaladdan oo kale waxaan ku diyaarin doonaa baaquli yar oo leh biyo kulul (aan karkarin) qaarna waan tuuraynaa dhibco saabuun dareere ah. Waxaan uga tagi doonaa inay hoos u dhigto dhowr shan iyo toban daqiiqo si ay wasakhdu u jilciso. Kadibna waxaan ku caday karnaa meelaha caday, maro ama suuf suuf ah. Waxaan diiradda saari doonaa dhammaan aagagga nafisyada ah, ee marinnada iyo meelaha jeexjeexyada ah, meelaha shaashadda daabacan iyo jeexjeexyada. Kadibna waxaan si fiican ugu qallajin doonaa maro nadiif ah.
Xadhkaha maqaarka sidoo kale waa lagu nadiifin karaa iyadoo la kaashanayo biyo saabuun ah iyo maro jilicsan. Waxaan ku shubi doonaa saabuun leh PH dhexdhexaad ah waxaanan ku dhejin doonaa suunka dhaqdhaqaaq wareeg ah. Si loo dhammeeyo, waxaan ka saareynaa saabuunta xad-dhaafka ah biyo yar waxaanan dhameyn doonaa qalajinta hawada furan.
Daawo Nadiifinta Kiiska
Waxa laga yaabaa in gabalkani yahay mid aan biyuhu celin karin. Si kastaba ha ahaatee, xiriirkooda biyaha waa la yarayn doonaa inta ugu badan ee suurtogalka ah haddii loo baahdo in la qaado tallaabooyin. Waxaan isticmaali doonaa biyo saabuun ah caday jilicsan oo jilicsan. Waxaan ku xoqin doonaa dhammaan qaybaha dhaqdhaqaaqa wareega iyo samaynta dhacdooyinka dhammaan qaybaha qallafsan, oo leh laalaabyo dhagaxyada qaarkeed, haddii ay jiraan. Iyada oo la kaashanayo suufka suufka ah waxaad sidoo kale nadiifin kartaa qaybo ka mid ah qaybahaas oo lagu dhamayn karo khamriga isopropyl ama biyo saabuun ah oo isku mid ah.
Si loo dhammeeyo, waxaanu u ogolaanay saacaddu inay engegto. oo maro jilicsan leh waanu xoqin doonaa dhammaan qaybaha iyo gunta iyo xiiqsiyo si aad uga saarto dhammaan dareeraha xad-dhaafka ah. Kadibna waxaan u ogolaan karnaa inay ku engegaan shukumaan si qoyaanka oo dhan meesha looga saaro.
Immisa jeer ayaan nadiifin karnaa saacad?
Ser waxa ay ku talinaysaa in la sameeyo nadiifin qoto dheer bishii hal mar ama dhowr bilood ka dib. Haa, waxaad ku nadiifin kartaa xargaha maalin kasta maro yar si aad wasakhda uga saarto maalinta.
Waxaa jira saacado qaali ah waana qaybo gaar ah. Talo ahaan, waxaanu ku talinaynaa in saacada noocaan ah loo geeyo xirfadle ama saacad-sameeyaha si uu kaagala taliyo sidii aad u nadiifin lahayd ama haddii ay suurtogal tahay in la nadiifiyo ama dib loo soo celiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Sida loo nadiifiyo saacada gacanta
Waa maxay Smart Casual ee ragga